Google I / O 2018: 127 Nyika, 6 Manzwi Matsva, 0 Mabhatani & Chii Zvimwe? - NewGenApps
Events, Google, Google I / O, newgenapps, zvigadzirwa zvetekinoroji, zvigadzirwa zvetekinoroji
Google I / O 2018: 127 Nyika, 6 Manzwi Matsva, 0 Mabhatani & Chii Zvimwe?
Google yagadzira imwezve stellar chiratidzo muIT neI / O 2018. Chiitiko ichi chakaitika kuShoreline Amphitheatre muMountain View, California. Iyi 2018, iyo 2-awa kiyi yakakosha yakatungamirwa na Sundar Pichai pamwe nevamwe vatungamiriri vakuru. Chiitiko ichi chaive chakazara nenhau pane dzakasiyana siyana dzinonakidza nyaya kubva kune yekuona yedu 'Dhijitari Hutano' kuita hupenyu hwakangwara neAI. Hechino chirevo pazviziviso zvikuru.
Google Mubatsiri Kutora Giant Leaps:
NaI / O 2018, Google Mubatsiri ari kuwana kwete kungova nehungwaru chete asiwo quirky. NaGoogle Duplex, mubatsiri iye zvino anogona kufona achimiririra mushandisi. Iko kushevedzwa kufona kunoitwa neGoogle Mubatsiri kune salon rebvudzi ndiko kwairatidza kubira. Chinhu chakakodzera wachi. Iyo hurukuro yakanzwika yakasikwa zvekuti unogona kungodonhedza shaya.
Isu tinoziva zvinoshatirisa kuramba tichitaura 'Ok Google' mukukurukurirana kwese. Pakupedzisira, Google yakanzwisisa uye yaunza akaenderera mberi nekutaura. Zvichienderana nemamiriro, Google Mubatsiri anogona ikozvino kunzwisisa kuenderera uye hapana chikonzero chekudzokorora 'Ok Google' nguva dzese. Nemazwi matanhatu matsva ari kuuya kushamwari yedu, kutaura neGoogle kunozova nzira iri nyore. Zvakare, John Legend izwi richava chikamu chechinyorwa gare gare gore rino.
Pane zvakawanda mumamepu izvo zvekuti Google inokodzera kuombera maoko. Mamepu ikozvino anosanganisa simba reGoogle Street View, Mubatsiri, uye maLens! Ehe, iyo Mepu sekuziva kwedu haisisiri sevhisi yeGPS. Yaro Yelp + AR Bhurawuza + Nhungamiro. Nesimba reAR rakabatanidzwa nekamera kuratidza, isu tinogona ikozvino kuona chaiwo-nguva madhaidhi uye ruzivo. Tinogona kunongedzera zviri nyore kunzvimbo yakaita sehafi kana bhawa uye kuwana nzwisiso pane ongororo, menyu, zvemukati nezvimwewo zvakare zvinokwanisa kuona zvinhu nemhuka semarambi nembwa zvichiteerana.
Amazon ine yayo Echo yanga iri yakanaka kwazvo mukutonga kwakangwara uye smart vatengi zvemagetsi zvakajairika. NaI / O 2018 Google yave kuda kudzoka mumutambo. Kuratidzwa kwechigadzirwa chiri kukwevera Jimmy Kimmel Live paYouTube TV ingori imwe yemuenzaniso wekugona kwezviri mukati izvo Google inogona kupa.
Google iri kuunza simba reMubatsiri neYouTube mune smart kuratidza uye isu tinogona ikozvino kuona kuti ichaongorora sei kukwira kweAmazon mumusika. Amazon kunyangwe mushure me Prime haigone kukwikwidza negero rakakura seYouTube. Zviripachena, Amazon haizove ichiwana rutsigiro kubva kuGoogle - haizongopi nhaka yayo chete, kana ichaita? Iwo michina ine yakavakirwa-mukati Google mubatsiri ichatanga kutumira kubva muna Chikunguru.
Google yakaratidza kufarira kwayo chakagadzirwa njere kwenguva yakareba. Ikozvino, iri kuita zvese kuti ifambise hunyanzvi hwayo. Zviri pachena kuti Google iri kutarisa mukuvandudza AI uye nekumisikidza hunyanzvi hwepasirese. Mamwe acho maapp izvo izvo zvava kungwara ndezvi:
Nhau dzeGoogle dzava kushandisa chakagadzirwa njere kuendesa yakanakisa nhau kuvanhu zvichibva pane zvavanofarira, zvakavimbika zvinyorwa, uye geography. Iri sevhisi nyowani rava kuuya kunyika zana nemakumi manomwe nenomwe. Facebook inogona kuona izvi seyambiro. Nenyaya ichangoburwa yeCambridge Analytica nyaya, mukurumbira wekambani watambura zvakanyanya. Sezvo isu tichiziva kuti Facebook yepamoyo inopa ndeye 'Nhau Kudya'. Kunyangwe iwo maviri ari akasiyana zvakadaro, pane mukana wakasimba weGoogle kutora chikamu chikuru chevateereri.
Mifananidzo yeGoogle nezvakaitika munguva pfupi yapfuura zvave zvakanyanya kuomarara. Uchishandisa chakagadzirwa njere iyo Mifananidzo app ikozvino inokwanisa kunzwisisa mufananidzo uye kushandisa kurongedza kwemavara kusimbisa izvo zvakakosha. Mifananidzo inogona kunyange kuisa muvaraidza ako ekare matema uye machena mapikicha kana kushandura kumashure nechena kusimbisa zvinhu zviri muvara pikicha. Iyo app inokupawo iwe kurudziro yekukurumidza kugadzirisa uye kugadzirisa auto paunenge uchitsvaira kuburikidza neye gallery.
Kuumba maemail hakungambove kuri nyore. Isu tanga tichishushikana nematemplate uye emuenzaniso magwaro kwenguva yakareba asi ikozvino Google inoigadzirisa kamwechete uye zvachose. Gmail ikozvino yoshandisa simba re chakagadzirwa njere kupa mazano ezvimedu paunenge uchigadzira tsamba. Funga nezvayo se auto-mazano e Android. Izvi zvinofanirwa kuita kuti hupenyu hwedu huve nyore sezvo nguva yakawanda ichishandiswa zviri nyore mukunyora maemail.
Yega-yekutyaira mota imwe futi danho rave mukuvandudza kwenguva yakareba. Waymo inotsigirwa neAlfabhethi Inc. (Kambani yemubereki yeGoogle) yave kuvhura sevhisi yakazara yemotokari. Vanhu vava kugona kubhuka Waymo cab vachishandisa app yakafanana neiyo UBER uye unakirwe nebasa. Iyi sevhisi ichave ichiwanikwa kupera kwegore rino.
Kutevera Apple, Google iri kuunzawo majeti kune Android. Zvino, Android ichavawo isina bhatani uye kushandisa iPhone X kufanana nemasaini - kwete nyowani manje. Izvo zvinonzwa senge itsva ndeye 'Dhijitari Hutano' kutanga. Zvino Android P ichauya ne dashboard iyo icharatidza huwandu hwenguva inoshandiswa pane yega maapplication uye zviziviso. Chinangwa ndechekubatsira vanhu kunzwisisa maitiro avo ekushandisa mbozhanhare uye kutora matanho ekuona rugare rwepfungwa.
Chimwe chimiro mu Android P ndiyo 'chidimbu'. Paunenge uchiita zviito sekutsvaga, mushandisi anogona kuona bhokisi rebhokisi kubva kune pre-yakaiswa maapuro ane chekuita neruzivo nezviito. Iyo ficha inoda kuwedzerwa kumaapps ne Developers. Kufamba uku kuchawedzera iko kuchengetedza kweapp nekuita.
Unoda kukwidziridzira yako app kune Android P? Taura nekutaurirana.
Kupa simba AI:
Google yakadzora chikamu chayo chekutsvagisa seGoogle AI nguva isati yasvika. Iko kufamba kunoratidza kutarisa kweGoogle paR&D mumunda. Iyi I / O 2018, kambani yakaita mamwe majesu ekuratidza kugona kwayo pane ese mahardware uye. Software Level.
TPU Machine Kudzidza Hardware:
Google yakatanga chizvarwa chayo chechitatu chesilicon - iyo Tensor processor processor Unit 3. Ino nguva iri 3.0x ine simba uye inopa kusvika zana petaflops mukuita. Sekutaura kwaSundar Photosi, processor yacho ine simba zvekuti kune yekutanga kambani yaifanira kushandisa inotonhorera yemvura mumaseva avo. Isu tinogona pakupedzisira kuona chip inokwanisa kubata yakaoma maitiro anodikanwa mu chakagadzirwa Intelligence.
Google yakatanga itsva Software Development kit for mobile Developers kuunza Machine kudzidza kugona kune avo maapp. Iye zvino kushandisa Google-yakapihwa ML mamodheru mumaapps zviri nyore kupfuura nakare. ML Kit inotsigira kutarisisa kwemavara, kuona kumeso, kuongorora bhakhodhi, kutora mazita emifananidzo uye kucherechedzwa. Kufamba kunoratidzika kunonoka zvishoma Apple payakatangisa CoreML uye Chiono yechinangwa chimwe chete muna 2017. Zvakanaka, zvirinani kunonoka kupfuura kusati kwamboitika.
Google irikuedza kwazvo kuita wo Developers uye uzviise kune ecosystem yayo. Hondo pakati peApple, Amazon, Google, Facebook, uye Microsoft inoita kunge mafuta mazuva ese uye ndiyo Developers vari kuwana zvakanakisa mairi. Iwo makambani ari kuita zvese kuti ave nechokwadi chehukuru hwavo maererano nerutsigiro uye kugona muAI. Izvo zvataurwa pamusoro apa kubva kuGoogle zvingangovapa mukana.
Kufarira AI? Tora eBook yazvino pamafambiro uye zviitiko